Hifu Machine, Anti Kuchembera Machine, Runako Laser Machine - Sincoheren
Yakasimbiswa muna 1999, Beijing Sincoheren S & T Development co., Ltd. ndeimwe yekutungamira kwekugadzirwa kwehunyanzvi hwemberi zvigadzirwa zvekunaka uye zvigadzirwa zvekurapa ...
Hwakanaka mweya we Enterprise. Yakagadzwa muna 1999, Beijing Sincoheren S & T Development co., Ltd. ndeimwe yekutungamira kugadzirwa kwehunyanzvi hwemberi runako equipments uye zvekurapa zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zviri kutengesa zvakanyanya muzvizoro, aesthetics uye dermatology minda. Iyo yekugadzira iri pasi pe ISO13485 mhando sisitimu uye inowirirana neEC chitupa.
IPL SHR Ganda Rejuvenation Machine IPL
Ichangoburwa tekinoroji yeIPL-SHR ndiko kusimudzira kwedu kwechitatu-chizvarwa chevakangwara kupomba mwenje kurapwa masisitimu, uchishandisa OPT-yakakwana kurova tekinoroji. Marapirwo akasiyana siyana anosanganiswa pamwe nemhando dzakasiyana kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Q-Inoshandurwa Nd Yag Laser Machine
Q-Switched Nd: YAG ine yepamusoro yepamusoro simba uye nanoseconds-chikamu chekupomba upamhi. Melanin mu melanophore uye cuticle yakaumbwa maseru ane pfupi inopisa inopisa nguva yekuzorora. Inogona kubva yangogadzira diki yakasarudzika simba inonwiwa granules (tattoo pigment uye melanin) kuputika pasina kukuvadza zvakakomberedza zvinyama zvakajairika. Iyo yakaputika pigment granules inoburitswa kubva mumuviri kuburikidza necirculatory system.
808nm 755nm 4064nm Wavelengths Diode Laser Bvudzi Kubvisa Sisitimu
Razorlase diode laser inosanganisa matatu wavelength e755nm 808nm 1064nm, iyo inogona kunyatso kusvika nekudzika bvudzi follicle. Iyo melanin mune yebvudzi follicle inosarudza uye izere kupinza laser simba uye ichapiswa. Pakupedzisira, bvudzi follicle stem sero rinokuvara.